Nzọụkwụ asaa na ụzọ nke okwukwe | Apg29
Nzọụkwụ asaa na ụzọ nke okwukwe
Your nzọụkwụ mbụ na ụzọ nke okwukwe.
Isiokwu a na-e dere maka ndị na-natara Jizọs na a zọpụtara.
Iji malite, Achọrọ m ikele gị na ị natara Jizọs na ọkọdọ zọpụta! Nke a bụ ihe kasị mma pụrụ ime onye ọ bụla. Ugbu a, amalite a ọhụrụ fabulous ndụ gị na Jizọs Kraịst.
Ọbụna ndị fọdụrụ n'ezinụlọ njem amalite na a nzọụkwụ, onye kwuru. Nke a dị mkpa karịsịa mgbe ọ na-abịa okwukwe ije. N'ihi na ugbu a ị na-echekwara na-aga eluigwe, nke a apụtaghị na ị na-ugbu a n'ụzọ zuru ezu mepụtara n'ógbè nke okwukwe. Ma ugbu a, ihe niile na-amalite. Ugbu a ị pụrụ ịzụlite ma na-amụta mara Jizọs ọbụna karị.
Na-eche nke a mụrụ ọhụrụ: Ọ bụghị ọma n'ụzọ zuru ezu mepụtara? Ọ nwere ike na-amalite na-agba ọsọ, na-awụlikwa elu, na-agba egwú na-agba ọsọ na-agba ọsọ ụgbọ ala ozugbo? Ọ dịghị, ma ọ bụrụ na ọ na-ekwe na-eto eto, na-amalite na-eme otú eleghị anya, o nwere ike na-agba ọsọ na-agba ọsọ ụgbọ ala mgbe ọ bụ oge maka ya.
Akwụkwọ a kwesịrị banyere gị na mbụ nzọụkwụ na ụzọ nke okwukwe. Ị na-adịghị n'ụzọ zuru ezu mepụtara n'ihi na ị na-ugbu a mụrụ na Christ. Ọ nwere ike na-eme gị, dị ka nwa ọduọ na-akụrisị gị. Ị na-ada. Ma adịghị enye. Bilie gaa na na Jizọs na ụzọ nke okwukwe!
Nzọụkwụ mbụ ị ewerela ya. Ọ bụ mgbe ị na-jụrụ Jizọs na-abịa n'ime obi gị.
Ná Ndị Rom isi 10 na n'amaokwu nke 9 na-ekwu, nke a:
"Nke ahụ ma ọ bụrụ na ị na-ekwupụtara na ọnụ gị na Jizọs bụ Onyenwe na obi gị kwere na Chineke kpọlitere ya n'ọnwụ, ị ga-azọpụta."
The okwu zọpụta pụtara nanị "azoputa"! Ọ pụtaghị na ha na-anụ ọkụ n'obi, nkọ na-anụ ọkụ n'obi na ihe ọ bụla. Mgbe m natara Jesus, m na-nanị azoputa - zọpụta!
Azọpụta - site na gịnị? Ị anwụghị, ihe ndị ọzọ, site n'aka mmehie na si a na-efu na mgbe ebighị ebi hell!
Iji-azọpụta, onye ga-ekwupụta mkpu na ọnụ ya na Jizọs bụ Onyenwe na kweere na Chineke kpọlitere Jizọs n'ọnwụ. Ọ bụrụ na ị mezuo abụọ ndị a chọrọ, ị ga-amarakwa na 100% n'aka na ị na-ugbu a zọpụta. Olee otú ị pụrụ isi mara na? Ọfọn, n'ihi na Bible na-ekwu, otú ahụ! Ọ dị mkpa na-atụkwasị obi na Bible mgbe ọ na-abịa ihe dị ka nke a. Ị nwere ike mgbe aga site ihe mmetụta na-ekwu. Mmetụta nwere ike otu ụbọchị sị, "Oh, otú magburu onwe na m na-azọpụta," na ụbọchị nke abụọ, ma eleghị anya ị na-eche n'ezie na ị na-azọpụta. ọ
bụghị banyere "obi na-adị" ma ihe Bible na-ekwu n'ezie! Ị ga-arapara n'ahụ nke a dị mfe na-achị mgbe ahụ, ọ ga-aga nke ọma n'ihi na ị na-na ụzọ nke okwukwe.
On okwukwe hiking, i nwere ike na-ezute dị iche iche ihe ndọghachi azụ. Mgbe ahụ, ọ dị mkpa na-arapara Jesus. Ọ bụrụ na ị na-eme, ọ ga-aga n'ụzọ na okwukwe na-esiwanye ike.
E nwere ihe abụọ dị iche iche nke ndị mmadụ mgbe ọnwụnwa na mkpagbu. Otu n'ime ha na-agbapụ n'aka Jizọs. Nke abụọ na-agba ọsọ ka Jesus. E na-agba ọsọ pụọ Jizọs na ndị na-ejehie nke okwukwe. Ebe kama ịgbaga Jesus ma dị ike n'okwukwe.
Mgbe nwa ọhụrụ ahụ ga-amụta na-eje ije, ọ ga-ada. Ọ ga-ada na-dozie. Ma ọ ka ga na-eme isi ike, ga-esi na-agbalị ọzọ. Nke a na-achị bụ dị gị mkpa. Ọ pụrụ ịbụ na ị na-ada na ụzọ nke okwukwe. Ekwela edina e na bụ mwute. Bilie, na-arịọ Chineke maka mgbaghara na-aga na Jesus.
Dị ka a ọhụrụ kwere ekwe na i nwere na-a ihe ole na ole na ya ibu na-adịghị mma. Na nke a, ọ ga-adị ya mma. Ị ga-eso Jizọs na-eje ije na Ya. Ihe na-adịghị mma na akpa gị, ọ ga-enyere gị aka tufuo mgbe ọ bụ oge. Ihe niile na-akwụsị ozugbo mgbe ị nabatara Jesus ma na-azọpụta, ma ọ ga-apụ n'anya na oge. Ọ bụ nke a na n'ihi okwu ọzọ a na-akpọ nsọ.
M na-achọ ndị kwuru na a na-ekwu na ọ bụ nnọọ nkịtị ka ndị ọhụrụ kwere ekwe n'oge ọ ga-a hefty doro anya agha. Ee, ọ bụghị naanị na nkịtị, kama ọ bụ mgbe niile otú ahụ! O nwere ike ịbụ n'oge ahụ, ọ pụrụ abịa mgbe e mesịrị, ma ọ ga!
Na nke a doro anya agha ga-abụ njedebe ma ọ bụrụ na anyị na-anọgide na-eso Jizọs ma ọ bụ na-aga azụ ya ochie ndụ. Ọ bụrụ na ị họrọ Jesus dị ka okwukwe ike na iguzosi ike!
The nzọụkwụ nke abụọ
The nwa ga-anwụ ma ọ bụrụ na ọ dịghị na-oriri. N'otu ụzọ ahụ, ọ bụ na gị. Ị mkpa nri ime mmụọ. Ị na ị na-esi na ya, ị ga-n'ụzọ ime mmụọ malnourished na anwu n'ụzọ ime mmụọ na okwukwe gị.
Olee otú ị ga-esi nri? Ị nwere ike nweta nri dị iche iche. Tinyere ihe ndị ọzọ, i nwere ike iri onwe gị. Ị na-eme nke a site na-agụ Bible. Ọ bụrụ na ị bụ ọhụrụ na-agụ Bible, m nwere ike ikwu na-amalite na New Testament (nke bụ ndị ọzọ akụkụ nke Bible), ma na-agụ Oziọma Mak. Nke a bụ ka malitere. Mgbe ahụ, n'ezie, na-agụ dum Bible.
E nwere ndị na-agbalị na-agụ Bible site cover na-ekpuchi. Dị ka a ọhụrụ kwere ekwe, nke a bụ ike na-eme. Biko gụọ na-aga n'ihu a isi nke Old Testament (nke bụ akụkụ mbụ nke Bible), na na New Testament kwa ụbọchị. Mgbe ahụ ị ga-ahụ na okwukwe gị ga-eto eto.
I nwekwara ike nweta nri site na-eje ozi! Ihe ị na-enweta site na-aga na-a Christian ụka na-ekwusa na ihe niile nke Okwu Chineke na-na Bible Jesus! M nwere ike ikwu gị ka ị kpọtụrụ a na chọọchị dị n'ógbè ebe i bi. Ị na ị na-aga a na chọọchị otú m nwere ike-enwe obi ụtọ inyere gị aka na na kọntaktị. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ị na-atụgharị a zọpụta Christian onye ị tụkwasịrị obi. Ya mere, ọ nwere ike na-enyere gị aka.
Olee otú ị mara ma ọ bụrụ na ndị Assembly nwere ikike na-amụta? - ekwupụta Onyenwe anyị Jizọs, i kwesịghị ịdị na-echegbu onwe.
Agba nke atọ
Malite Ikpe ekpere!
Na m na-ekwu na ị na-free ọnụ gị Jesus. Jizọs zọpụta gị na ya
chọrọ nwere mkpakọrịta na-ị. Ọ chọrọ ịgwa gị na ị ga-esi agwa ya okwu. Nke a dị mkpa.
Ọ bụrụ na ị hụrụ mmadụ n'anya, ị na-eme n'ezie eme ka mgbalị ịgwa onye ahụ. N'otu ụzọ ahụ ọ bụ na Jizọs. Ị adịghị mkpa ka nsogbu ma ọ bụ erughị ala ọ bụla okpukpe uru. Ọ dịghị, ọ bụ eke. Kọọrọ ya kwa ụbọchị. Na-ekwu na ị nwere ya na-eji oge ha na ya. Na ọ na-enwe mmasị.
M ike weghara juputara na niile ekpere nzuzo ebe a, ma m chọrọ na-agba gị na otu ihe: Chineke chọrọ ka ị na-ekpe ekpere. Ọ na-akpọ nke a ọtụtụ ugboro na Bible.
Na isi 21 na amaokwu 22, Jizọs na-ekwu nke a na Oziọma Matiu:
"Ihe ọ bụla ị na-arịọ n'ekpere ka ị ga-enwe, dị ka ị na-eche."
Jizọs na-ekwu, mgbe ahụ, ebe a ị nwere ike nweta azịza ekpere banyere ihe ọ bụla ị na-ajụ maka!
I nwere ike ikpe ekpere ka Jizọs, ma Jesus agbakwa ume ikpe ekpere ozugbo na Nna n'aha Jizọs. Dị ka nkwa azịza ekpere! Nkwa dị otú ahụ, Jizọs na-ekwu na Jọn isi 16 na amaokwu 23:
"N'ụbọchị ahụ, ị ​​ga-ajụ m banyere ihe ọ bụla. Amen, amen m asị unu: ọ bụla unu arịọ Nna n'aha m, ọ ga-enye gị. "
Echefukwala na-ekele Chineke na o azọpụtawo gị. Keleenụ maka ihe Jizọs meere gị. Nke na ọ nwụrụ na a kpọlitere ya n'ọnwụ. Na ọ dị ndụ taa nakwa na ọ agbaghara mmehie gị. mgbe ahụ
a bụ n'ezie n'ihi na gị na okwukwe na-esiwanye ike.
Mgbe i kwesịrị ịjụ? Azịza gị ga-esi na Bible na First Tesalonaịka isi 5 na amaokwu nke 17:
"Na-ekpe ekpere n'akwụsịghị akwụsị."
The anọ ogbo
Na Ọrụ Ndịozi isi nke 2 na amaokwu 38 Peter emegharị ndị mmadụ ihe ha ga-eme:
"Pita zara, sị, 'Chegharịanụ na baptizim n'aha Jizọs Kraịst ka mmehie gị nwere ike gbaghara ya. Na unu ga-enweta Mmụọ Nsọ dị ka onyinye. ' "
Onye ọ bụla ga-ahụ chegharịa, na niile ndị e mere baptizim. Okwu Chineke na-ekwu na ị ga-ekwe ka onwe gị baptizim. Mgbe ị na-eme nke a, i nwere na-a nkwa: iji nye gị na Mmụọ Nsọ dị ka onyinye! N'oge Bible gụnyere nzọpụta nke ndị a ihe atọ: nchegharị, baptism na Mmụọ Nsọ dị ka onyinye.
Ị kwesịrị ka onwe gị baptizim n'aha Jizọs Kraịst. Ị baptism gi na chọọchị ọ bụla aha, ma ọ bụ na aha Jesus. Ị baptizim ma ọ bụ na ihe ọ bụla onye, ​​ma ọ bụ ka na Jizọs.
Ị na-baptizim na-kpamkpam mikpuru n'ime mmiri na mgbe ahụ ọzọ dị ka Bible na-ekwu na Ndị Rom isi 6 na amaokwu 3-4:
"Unu na unu amaghị na anyị niile bụ ndị e mere baptizim baa na Kraịst Jizọs e mere baptizim baa n'ọnwụ ya? Ya mere, anyị na-site na baptism iba n'onwu: lìe ya na ya, anyị onwe anyị pụrụ ibi ndụ ọhụrụ, dị ka emere ka Kraist si na ndị nwụrụ anwụ site na ebube nke Nna ya. "
Baptizim bụ a nkwupụta nke gburugburu ebe obibi na ị na ugbu a nke Jizọs. Ị na-baptizim n'ime Jizọs Kraịst, mgbe niile na nke ya! Baptizim bụ a akara na gị ugbu a nwere chegharịrị Chineke.
Na Mak isi 16 na amaokwu 16, Jesus kwuru, sị:
"Onye ọ bụla nke kwere na baptism ga-azọpụta, ma onye ọ bụla adịghị kwere ga-ikpe."
The ise ogbo
Baptizim Mmụọ Nsọ!
Anata Mmụọ Nsọ dị ka onyinye! Nke a nzọụkwụ m ugbua otụk na. Ị mkpa ike na-ebi ndụ dị ka a Christian na-eme ihe Jizọs nyere unu n'iwu. Ị ga-chọrọ enyemaka gị kwa ụbọchị na ije na Jesus.
John ibuot 14 na amaokwu 16-17, Jizọs kwuru nke a:
"M ga-ekpe ekpere Nna, na ọ ga-enye gị ọzọ esịt, ka o wee binyere gị, na Mmụọ nke eziokwu, onye ụwa na-apụghị inweta. Maka ụwa na-ahụ ya ma ọ bụ maara ya. Ị maara ya, n'ihi na ọ na-anọgide na ị ma ga-na gị. "
Ebe a na ọ na-ekwu na ụwa na-apụghị inweta ndị nkasi obi, ma ọ na-enye ohere ka i kwere na Jizọs. Mmụọ Nsọ bụ onyinye na ị na-anabata site n'okwukwe. N'otu ụzọ ahụ ị natara Jesus!
Ozugbo ị natara Mọ Nsọ otú i nwere ike na-amalite na-ekwu okwu n'asụsụ nke dị ka ọ na-ekwu na Ọrụ Ndịozi isi nke 2 na amaokwu nke 4:
"Ha nile we juputa na Mọ Nsọ na wee malite ikwu okwu n'asusu di iche, dika Mọ nyere ha kwuru."
All e jupụta na Mmụọ Nsọ na wee malite ikwu okwu n'asụsụ nile. Asụsụ kwuru n'ebe ndị ọzọ na Bible. Ka ihe atụ, na Ọrụ nke-iri isi na amaokwu 45 na 46:
"All ndị Juu kwesịrị ntụkwasị obi bụ ndị bịara na Peter ju ha anya
na Mmụọ Nsọ onyinye a wụsara ndị Jentaịl a na-. N'ihi na ha nụrụ ka ha na-ekwu okwu n'asụsụ dị iche iche ma na-eto Chineke. "
Na Ọrụ Ndịozi isi nke 1 na amaokwu 8, Jesus kwuru, sị:
"Ma, mgbe Mmụọ Nsọ na-abịakwasị unu, + unu ga-abụ ndị àmà m n'ime Jerusalem, na n'ime Judia na Sameria nile, ru kwa na ụwa."
Onye nke isii nzọụkwụ
Agba akaebe na nke Jesus!
Gwa ndị ọzọ banyere okwukwe gị na Jizọs Kraịst. Anọla ya onwe gị. Ị na e-azọpụta, mmehie ma nwee ndụ ebighi ebi. Ka ndị ọzọ na-enwe otu ihe ahụ.
Na Ọrụ Ndịozi isi nke 4 na amaokwu 20 kwuru a dị ịtụnanya nkwupụta:
"Anyị onwe anyị apụghị ikwu okwu ihe ndị anyị hụworo ma nụ."
Iji agwa ndị ọzọ banyere Jizọs bụ ihe kasị mma na nke kasị dị irè ụzọ onwe-eto ma na-ike na okwukwe ha.
Sọl mechara gụọ ya Paul, e zoputara, o malitere ozugbo-agba akaebe na-agwa ha banyere Jizọs. N'ihi nke a, o nwetara ihe ike. I nwere ike na-agụ na Ọrụ Ndịozi isi nke 9 na amaokwu 22:
"Ma Sọl ghọrọ ihe na ọzọ ike, na ndị Juu ndị bi na Damaskọs, ka o gosi na Jizọs bụ Mesaya ahụ."
Ihere emela nke Jesus. Mgbe ị na-eguzo n'ihi na nkwenkwe gị, ndị mmadụ ga na-akwanyere gị. Ị na e mezuru site Jesus.
"N'ihi na ihe dị n'obi jupụtara, ndị ọnụ na-ekwu."
Nke a Jizọs kwuru na Luk isii isi na amaokwu 45. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe na anyị bụ ndị na-enthusiasts nke ndị dị otú ahụ football, otú anyị enweghị nsogbu na-ekwu okwu banyere ya na ndị enyi anyị. Anyị na-adịghị ahụ n'ụzọ ọ bụla na-etinye mgbalị. Ọ dị ya nnọọ na-aga n'ime. Ugbu a, n'ezie, Jesus gbanwee ndụ anyị. Kwesịrị anyị na-agwa banyere ya ndị ọzọ?
The asaa nzọụkwụ
Jide ka Jesus!
Ihe ọ bụla na-eme: Jide ka Jesus! Ekwela ka ihe ọ bụla ka ị na-ahapụ ya. Ọ bụ ihe kasị mma na-mere gị!
Ị ga-arapara n'ahụ Jesus ruo ọgwụgwụ, ị ga-Li vets okpueze n'ime Eluigwe! Nke a Jizọs kwuru na Mkpughe 3 na amaokwu 11:
"M na-adịghị anya. Jide ihe i nwere, nke mere na ọ dịghị onye ga-ewe gị okpueze. "
All ndị a nzọụkwụ asaa bụ nanị mmalite. Nke a bụ ebe ọ na-eme:
- ije na Jizọs amalitewo!